सेप्टिक ट्यांक एक निपटाने ट्यांक र फिल्टर रूपमा सेवा गर्दैछन्। उहाँले मलजल recycles र तिनीहरूलाई वातावरण हानिरहित बनाउँछ। सबै सेप्टिक ट्यांक चार ठूलो समूह विभाजित गर्न सकिन्छ:
त्यसैले सबै विकल्प हेरौं।
1 ठोस छल्ले को सेप्टिक ट्यांक गर्न आफ्नो हातमा सधैं सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा लागि, तपाईं एक प्लास्टिक समाप्त संस्करण खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीन compartments छ: भारी कणहरु देखि settles पहिलो पानी मा; दोस्रो किण्वन प्रक्रिया मा जीवाणुहरु को कार्य अन्तर्गत ठाउँ लिन्छ; तेस्रो भएको नुन देखि स्वच्छ पानी दिन्छ र यो वातावरण हानिरहित बनाउन।
2. चाहेको भने, तपाईं ठोस छल्ले को एक विशाल सेप्टिक ट्यांक कारखाना खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हात, पनि, गर्न सकिन्छ, तर यो ठोस, सुदृढीकरण र निःशुल्क धेरै समय आवश्यक थियो। एक तयार मात्र त यो तुरुन्तै काम सुरु हुनेछ, एक सेप्टिक ट्यांक स्थापना गर्न आवश्यक छ।
3. आत्म-गरे विकल्पहरू। ठोस छल्ले को सेप्टिक ट्यांक को निर्माण केही ज्ञान आवश्यक छ। सबै को पहिलो तपाईं राम्रो मा नाली प्वाल बारी छैन, भूमिगत को स्तर जान्नु आवश्यक छ। यो पनि formwork गर्न सही तरिका मात्र होइन हुनुपर्छ, तर पनि सम्पूर्ण संरचना विचार (खैर, यो भूमि मा पानी को outflow लागि यो कक्षमा प्रदान गर्न पहिलो आवश्यक छ)। को सम्प - एक सेप्टिक ट्यांक जो को सबै भन्दा ठूलो धेरै भागहरु, समावेश गर्नुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
4 सस्ता विकल्प - एक नाली प्वाल। यसलाई जो समेट्न ढल पाइप गर्न जमीन मा एक प्वाल छ। यो विकल्प पहिलो नजर मा सबै भन्दा आर्थिक छ। पहिलो, प्वाल चिस्यान अवशोषित गर्न सीमित क्षमता छ, त्यसैले तपाईं समय समयमा उत्खनन वा अशुद्धियों हटाउनका लागि नयाँ वैक्यूम ट्रक कारण गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, माटो मा भिजेको गर्न उपचार बिना नाली अनुमति दिने, हामी त्यो भूमिगत विषाक्तता रूपमा बस्ने क्षेत्र मा एक पारिस्थितिकी विनाश सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ।
सेप्टिक ट्यांक बिछाउने
सेप्टिक ट्यांक सधैं ठोस बनेको छैन। अक्सर एक आधार सामाग्री, ईटा, ग्लाजिंग, धातु, ठोस रूपमा प्रयोग। तपाईं एक सेप्टिक ट्यांक अखंड आर सी-एकाइ बनेको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई लामो समय, सानो वित्तीय लागत बाबजुद पछिल्लो हुनेछ। एक उत्पादन जस्तै को नकारात्मक स्थापना को जटिलता छ। आफ्नो हातले ठोस छल्ले को सेप्टिक ट्यांक: तर, यस्तो एउटा विकल्प हो। ठीक स्थापना गर्न, यी चरणहरू प्रदर्शन:
1 तपाईं एक सेप्टिक ट्यांक लागि प्वाल खन्नुहोस् सुरु अघि, यसको आकार गणना गर्न आवश्यक छ। यस को लागि यो एक परिवार एक दिन प्रयोग पानी राशि गणना गर्न आवश्यक छ। पनि हामी अतिथिहरू खपत गरिने पानी राशि यो संख्या थप्न। गणना निम्न परिणाम (लगभग) पैदावार: पाँच पाहुनाहरूसँग औसत परिवारको बारेमा 1,800 लिटर खपत। र पानी दिन settles भएकोले सेप्टिक ट्यांक6घन मीटर को एक मात्रा हुनु आवश्यक छ।
2. मलजल लागि खाल्टो खनाइ घर देखि पाँच मिटर भन्दा कुनै नजिक आवश्यक छ। प्राथमिक आकार - 3h3h2 मीटर। आफ्नो हातले ठोस छल्ले को एक सेप्टिक ट्यांक बनाउन, सबै तपाईं पिट पर्खाल फिटिंग मुहर गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, तपाईं जमीन देखि पाँच सेन्टिमिटर को एक दूरी मा फलाम स्थापना गर्नुपर्छ।
3. बनाउने र ठोस सुदृढीकरण संग formwork भर्न, पानी अवशोषित हुन्छ जो मार्फत Windows को लागि ठाउँ छोडेर पछि। यो पिट कारखाना मा बनेको छ जो, ठोस को तयार ब्लक सेट गर्न सम्भव पनि छ। एक सेप्टिक ट्यांक को उचित स्थापनाका लागि त्यहाँ उत्पादन स्थापना मा सबै आवश्यक विवरण संकेत जो ठोस छल्ले, एक विशेष योजना छ।
आफ्नो हात संग गेराज मा प्रकाश कसरी बनाउने?
कसरी पेन्सिल पार्क आकर्षित गर्न?
कुकुर मा Tartar: रोकथाम र उपचार
मुद्रा सुधार को लागि Corset: समीक्षा। मुद्रा सुधार को लागि हाडजोर्नी corset: जो एक राम्रो छ?
क्यान्ड सिमी देखि स्वादिष्ट र स्वस्थ सेम सूप